Ny ID amin'ny tarehy dia afaka mametraka sarintany amin'ny lalan-drà mba hialana amin'ny fisavoritahana eo amin'ny zaza kambana | Vaovao IPhone
Toa zavatra avy ao amin'ny James Bond Gadget Lab io, saingy tsia, tena izy io. Patenty vaovao vao azon'i Apple. Tsy voafetra ny fiheverany ny fanaovana fitaovana ho matanjaka kokoa. Fantatsika rehetra fa ny famoahana Face ID dia iray amin'ireo mpitsikilo tarehy azo antoka indrindra eto an-tany, na dia mihoatra noho ny an'ny seranam-piaramanidina maro aza.
Saingy hita fa ny fahafantarana ny tarehy toy izany dia mety hofitahina amin'ny saron-tava 3D tena misy ho an'ny mpampiasa, na tsotra raha manana tena mpirahalahy kambana ho an'ny. Mba hisorohana an'io lesoka io dia mikasa ny hanampy ny sarintany venna ny tavanao amin'ny Face ID i Apple. Ka tsy misy sarontava, tsy misy kambana ratsy fanahy. Lamba inona izany.
Ny fanekena ny tarehin'i Apple dia iray amin'ireo azo antoka indrindra eto an-tany. Misy kilema iray monja amin'ny iray tapitrisa. Ny ID ID amin'ny tarehy ihany no azonao atao saron-tava 3D tena zava-misy an'ny mpampiasa iPhone hamoha, na miaraka amin'ny kambana mirahalahy izay tena mitovy.
Mba hisorohana an'io dia nahazo fotsiny ny patanty mitondra ny lohateny «Fifanarahana amin'ny lalan-drà ho an'ny tranga fanamarinana biometrika sarotra«. Amin'ity patanty ity dia manolotra i Apple fa ny valiny dia mihoatra ny halalin'ny hoditra. Manokana, milimetatra vitsivitsy ambanin'ny hoditra, satria manondro fa ny lalan-drà dia azo ampiasaina ho toy ny famantarana tsy manam-paharoa sy tsy azo ovaina.
Na dia azo adika mora foana aza ny endrika ivelany, lalan-dra samy hafa be eo amin'ny olona izy ireo, na dia kambana aza. Satria eo ambanin'ny hoditra ihany koa izy ireo ary mibodo ny habaka 3D, dia sarotra be koa ny mamorona tarehy sandoka izay mihevitra ny firafitry ny lalan-drà raha tsy misy fiaraha-miasa matotra amin'ilay lohahevitra, na fombafomba manararaotra ara-pahasalamana.
Ny hevitra dia ny maka sy manampy ny sarintanin'ny lalan'ny tarehy amin'ny Face ID
Scheme miaraka amin'ny sarintanin'ny lalan-drà tafiditra ao amin'ny patanty.
Ny rafitra dia misy ny famoronana sarintany 3D an'ny lalan-drà an'ny mpampiasa mampiasa teknikan-tsary fitadiavana subepidermal, toy ny sensor infrared ao anaty fakan-tsary izay misarika modely tondra-drano sy teboka fanazavana infrared izay manazava ny endrik'ilay mpampiasa.
Izy io dia somary mitovy amin'ny fiasan'ny Face ID ankehitriny, satria ny hazavana infrared dia mivoaka amin'ny lamina amin'ny endrik'ireo mpampiasa ary vakian'ny fitaovana fanaovana sary, fa ny patantin'i Apple dia natao manokana ho an'ny detection ny lalan-drà fa tsy ny ivelany ny hoditra.
Ho hitantsika raha ampiharina ao amin'ny Face ID ny fitaovana Apple ho avy. Betsaka ny patanty omena izay tsy nahitam-bokatra velively.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Ny Face ID dia afaka mametraka ny sarin'ny lalan'ny mpampiasa amin'ny ho avy mba hisorohana ny fifanjevoana eo amin'ny zaza kambana